दुनियामा वनजंगलको क्षेत्रफल घटिरहेको छ । वनस्पतिहरु नासिँदैछन् । वन जोगाउन तथा बढाउनका लागि विश्वभर नै विभिन्न उपाय अपनाउने गरिएको छ । यसै क्रममा एउटा देशले वनजंगल बढाउन तथा पर्यावरण जोगाउन गज्जबको उपाय अपनाएको छ । फिलिपिन्सले यस्तो नियम लगाएको छ कि अब त्यहाँका विद्यार्थीले स्नातक तहको डिग्री हासिल गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा कम्तिमा १०...
डोटी / कुनै समय डाक्टरले निको पार्न नसकेको उपचार आफूले निको पार्न सक्ने दाबी गर्दै आएका यहाँका धामीझाँक्री पछिल्लो समय डाक्टरले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य शिविरमा गएर उपचार गराउन थालेका छन् । आफूमात्र नभई उनीहरु अहिले गाउँका अन्य बिरामीलाई पनि डाक्टर कहाँ गएर औषधोपचार तथा जाँच गराउन सल्लाह दिन थालेका शिखर नगरपालिका–९ का टेकबहादुर रावलले बताउनुभयो...
एजेन्सी । घरमा रमाएर बसेकी छोरीलाई एक पिताले माइत बोलाए । बुवाले बोलाए भनेर नावालक छोरा लिएर छोरी माइत आइन । तर ति नरपिशाच बाबुले आफ्नै छोरीको बलात्कार गरे । बलात्कार पछि छोरीको घाँटी थिचेर हत्या गरे । यो घटना भारतको झरखंड हरिहरगंजको घटना हो । बाबुले हत्या लुकाउन छोरीको शवलाई घरमै जलाए । लाश...
एजेन्सी । कहिल्यै तपाई सोच्न सक्नुहुन्छ एक महिलाले पुरुषको हत्या पश्चात लाशलाई बलात्कार गर्ने र लाशको रगत पिउन सक्छिन् ? सायद धेरै विश्वास गर्न गाह्रो पर्ला । तर, मेक्सिको २८ वर्षिय एक महिलाले आफ्नो सुन्दरताको जालमा पारेर धेरै पुरुषहरुको हत्या गर्ने काम गरेकी छिन् । जुआना नाम गरेकी ती युवती हाल जेलमा रहेकी छिन् ।...
भारतको एउटा गाउँ ‘टिल्टेपक’ का सबै मानिसहरु अन्धो छन् । उक्त गाउँमा बस्दै आएका जोपोटेक जनजातीका मानिसहरु वास्तबमा जन्मदेखि नै अन्धो भने हुँदैनन् । तर, उमेर बढेसँगै विस्तारै उनीहरुले आखाँको ज्योती गुमेको थाहा पाउँछन् । यो के कारणले भएको छ कसैलाई पनि थाहा छैन । यस गाउँमा अन्य थुप्रै रहस्यहरु भेटिन्छन् । एउटा रुखलाई मानिन्छ...
मानवशास्त्री एवं प्राइमेटोलोजिस्ट सारा हर्डी कुराकानी यसरी सुरु गर्छिन्, ‘ कुरालाई रोचक बनाउन मानिसहरु केही चुट्किलाबाट व्याख्या सुरु गर्छन् तर शिशु हत्यामाथि कुनै चुट्किला हुनै सक्दैन ।’ धेरैलाई यो कुरा अचम्म लाग्न सक्छ तर स्तनधारी जनावरमा शिशु हत्या सामान्य कुरा हो । २ सय ८९ स्तनधारी प्रजातीको नयाँ सर्वेक्षण अनुसार करिब एक तिहाई प्रजातिमा शिशु...
अचम्म : भारतको बिहारमा जन्मियाे टाउको बिनाको बच्चा , शिशुको रुप, रङग देखेर सबै अत्तालिए
हाम्रो छिमेकी देश भारतमा यस्तो दुनियालाई चकित पार्ने शिशुको जन्म भएका छन् जहाँ यो शिशुलाई हेर्नको लागी मानिसहरुको घुईचो लागेका छन् । भारतको बिहार भन्ने ठाउँमा ३५ बर्ष की खालिदा बेगमले केहि समय अगाडी यस्तो छोराको जन्म दिएका छन् । छोराको रुप, रङग देखेर सबै अत्तालिए दुनियालाई चकित भएका छन् । नवजात शिशुको टाउको पुरै...
एक घरी केरामा पाँच सय ५० कोसा
म्याग्दी / बेनी नगरपालिका–२ खवरामा एउटै केरा घारीमा पाँच सय ५० वटा कोसा केरा फलेको छ। म्याग्दीको खवरा गाउँ केराखेतीमा नाम चलेको नगरपालिका रहेको छ। नगदे बालीका रुपमा रहेको केरा खेतीमा म्यादीका किसान आर्कषित हुन थालेका छन्। उनीहरुले अहिले परम्परागत रूपमा खेती गरिँदै आएको कोदो मकैलाई विस्थापित गरेर केरा खेतीमा लागेका छन्।
बिहीबार कुन भगवानको व्रत बस्दा तपाईलाई लाभ मिल्छ ֍
हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले बिहीबार गुरु बृहस्पति तथा भगवान श्री हरि विष्णुको पूजा–आराधना गर्ने गर्दछन् । आजको दिन व्रत बस्नाले धन, पुत्र तथा विद्या प्राप्ति हुनेछ । यो दिन पहेलो रंगको कपडा लगाउने र पहेलै वस्तुको दान गरेमा शौभाग्य मिल्ने विश्वास छ । साथै, यो दिन विष्णुकी पत्नी लक्ष्मीको पनि पूजा गरिन्छ । यो व्रत शुक्ल पक्षको...
दुनिँया चकित पार्ने घटना : जुन पण्डितले नब जोडिको विवाह गरायो तीन दिन पछि उसैले भगाए बेहुली
काठमाडौ / विश्वमा कस्ता–कस्ता घटनाहरु हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । नेपालमा त यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन । आज हामी तपाई चकित पर्ने एक घटनाको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं । के तपाईले कहिलै सुन्नु भएको छ जुन पण्डितले नब जोडिको विवाह गरायो उसैले केही दिनपछि तिनै बेहुलीसँग विवाह गर्यो । हामी ढुक्कसँग...
यी हुन् विश्वमा सबैभन्दा धेरै सुन भएका देशहरु
सुन विश्वका महंगा धातुहरु मध्येको एक हो । यो व्यक्तिको मात्र होइन मुलुककै सम्पत्तिको सूचकको रुपमा पनि रहने गरेको छ । विश्वका धनी देशहरुसँग प्रसस्त मात्रामा सुनको भण्डारण रहेको छ । विश्वमा सबैभन्दा धेरै सुन रहेका देशहरु यी हुन्ः अमेरिका : यो देश विश्वमा सबैभन्दा धेरै सुन भण्डारण रहेको देशको सूचिमा पहिलो नम्बरमा छ ।...
काठमाडौं / हाम्रा वरिपरी हरेक दिन नयाँ र अनौठा घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । तपाईं हामी कतिले समाचार सुनेका छौं, डाक्टरको लापरबाहीले कोही बिरामीको पेटको अपरेशन गर्दा पेटभित्रै कहिले कैंची, त कहिले कपडाको टुक्रा छोडिएको हुन्छ । तर आज हामी त्यो भन्दा फरक सुनाउँन गइहरका छौं । भएको के भने बिरामीको पेटबाट ८ वटा चम्चा, २...
काठमाडौं / कतिपय युवाहरुमा यति धेरै ‘ग्याजेट’ मोह हुन्छ कि उनीहरु त्यसका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् । यस्तै मोह चीनका एक युवकसँग पनि पाइएको छ । उनले आइफोन किन्न आफ्नो किड्नी नै बेचिदिए । चीनका १७ वर्षीय जियाओ वाङ्गले आइफोन किन्नका लागि आफ्नो मृगौला बेचेका थिए । शल्यक्रियापश्चात वाङ्लाई एउटा मृगौलामा पनि साधारण...
भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कानपूर जिल्लामा अधबैंसे दुलहालाई देखेपछि दुलहीले विवाह गर्न अस्विकार गरिन् । भारतीय मिडियाका अनुसार दुलहीले दुलहातर्फ माला फ्याँक्दै चिच्याउँदै भनिन्, ‘ममाथि धोका भएको छ ।’ स्रोतका अनुसार दुलहीको यस्तो व्यवहार देखेपछि त्यहाँ उपस्थित पाहुना, जन्ती अचम्मित भए । त्यतिबेला आमाले छोरीलाई ठूलो दबाब दिइन् तर उनले मानिनन् । रिपोर्टका अनुसार निकै सम्झाएपछि...
विश्वको अनौठो परम्परा आमा छोरी दुबैसँग शारीरिक सम्पर्क, जान्नुहोस अरु के के गर्छन् ֍
देशमा आमाछोरीसँग बाुबले र ज्वाईले सासु र श्रीमतीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने गरेको पाइएको छ । यसलाई त्यहाँ परम्परा नै मानिन्छ । हरेक देशमा यौनका बारेमा आ–आफ्ना मान्यता, धारणा, परम्परा तथा कानून छन् । कहीँ सेक्सको विषयमा समाज निकै खुला हुन्छ भने कतिपय देशमा यो विषयमा समाज र कानुन नै निकै कडा हुन्छ । अझ केही...
पछिल्लो समय विद्यालयमा यौन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । विद्यार्थीलाई सानै उमेरदेखि यौनजन्य कुराहरुमा सचेत बनाउने प्रयास भइरहँदा एक स्कुलले भने आफ्नी छात्राले उत्तर पुस्तिकामा लेखेको उत्तरकै कारण ती छात्रालाई स्कुलबाटै निकालिदिएको छ । पछिल्लो समय एक छात्राले यौन शिक्षाको परीक्षामा दिएको उत्तर पुस्तिका सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भइरहेको छ । मात्रै १४...
शिक्षिकाले ट्युसनको बहानामा विद्यार्थीसँग बारम्बार याैन सम्बन्ध राखेपछि…
काठमाडाैँ / भारत हरियाणा राज्यको पानीपात जिल्लामा शिक्षिका र विद्यार्थीबीच अबैध सम्बन्ध रहेको सार्वजनिक भएको छ। जानकारी अनुसार ३० वर्षीया शिक्षिकाले आफ्नै १९ वर्षीय विद्यार्थीसँग अबैध सम्बन्ध राख्दै आएको समाचार बाहिरिएको छ । शिक्षिकाको आफ्नै विद्यार्थीसँग अबैध सम्बन्ध रहेको श्रीमानले जानकारी पाएपछि उनीहरुको दिनदिनै झगडा हुन थाल्यो । अन्तमा ती शिक्षिका आवेशमा आएर आफ्नो प्रेमी...
इटहरी/ इटहरीमा बिगत दुई महिनादेखि लगातार एउटा अनौठो चोरीको घटनाले महिलाहरु आजित बनेका छन् । इटहरी ४ स्थित सिसिर टोलमा महिला तथा युवतीहरुको भित्री बहिरन ब्रा सुकाएकै ठाँउबाट चोरी हुन थालेपछि स्थानिय महिलाहरु आजित बनेका हुन । टोलका महिला तथा युवतीहरुले धोएर सुकाएका ब्रा दिन र रातमै गायब हुन थालेको स्थानिय महिलाहरु बताउछन् । दिनमै...
आफूले पालेका सुगाहरुजस्तो देखिन वर्षौं लगाएर प्लाष्टिक सर्जरी गराएका एक व्यक्तिले एक कदम अगाडि बढेर आफ्नो नाम मिस्टर प्यारोटम्यानमा परिवर्तन गरेका छन् । ५८ वर्षीय टेड रिचर्ड आफूले पालेका सुगाहरु – एली, टियाका, टिम्नेह, जेक र बुबीप्रति यति आशक्त छन् कि उनले आफ्नो अनुहार र आँखामा सुगाको प्वाँखजस्तो ट्याटु बनाएका छन् । जनावर प्रेमी उनीको...
पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–ं ६ तालपोखरा बस्ने कृषक गोविन्दबहादुर घर्ती र हरिमाया घर्तीको घरमा पालिएको बाख्राबाट जन्मिएको आठ वटा खुट्टा भएको, एक वटा टाउको, छातीबाट तल दुई भाग फाँटेर छुट्टिएको, चार वटा कान भएको, पाठापाठी नचिनिने खालको अनौठो बाख्रा जन्मिएको छ । Subscribe PURBELI TV
भारतको बिहारस्थित एक व्यक्तिले आफ्नी श्रीमतीको विवाह अर्का व्यक्तिसँग गराइदिएका छन् । यतिमात्र होइन उनले आफ्ना साढे दुई वर्षका छोरा श्रीमतीलाई उपहारका रुपमा सुम्पिएका छन् । यो अचम्मको विवाहमा थुप्रैको उपस्थिती पनि थियो । घटना बिहारको सालेपुर गाउँको हो । जहाँ एक व्यक्ति आफ्नी श्रीमतीसहित भाडाको घरमा बस्थे । उनीहरुका साढे दुई वर्षका छोरा पनि...
थाइल्याण्ड । थाइल्याण्डका राजा महा वजिरालंगकर्नले बुधबार विवाह गरेका छन् । राजा वजिरालंगकर्णले उनकै सुरक्षामा खटिएकी एक महिलासँग विवाह गरेका हुन् । विवाहपछि उनलाई रानी सुथिडा नाम दिइएको छ । शनिबार राजा महा वजिरालंगकर्णको राज्याभिषेक हुँदैछ । यही समारोहलाई लिएर राजाले विवाह गरेको विश्वास गरिएको छ । बुधबार भएको विवाह समारोहबाट सबैजना अचम्ममा परेका छन्...
आफन्त बिरामी हुँदा प्रयोग हुने सिटामोल, ट्याबलेट तथा क्याप्सुलका पत्ता(खोल) तपाईँ के गर्नुहुन्छ ? सिधै डष्टबिनमा पठाउनुहुन्छ होला, तर त्यही पत्ता उपयोगी हुन्छ भन्ने कुरा थोरैलाई मात्रै थाहा होला । एकजना भारतीय कलाकार वीमान नागले भने त्यही पत्तालाई प्रयोग गरी आकर्षक मूर्ति बनाएर उदाहरणीय बन्नुभएको छ । उहाँका यी मूर्तिहरु अहिले काठमाडौँको नेपाल कला परिषद्मा...
धरान । धरानमा उदाहरणीय विवाह हुदै छ । राईको छोरो सँग विककी छोरीले मागि विवाह गरेकी हुन । धरान १३ को नविन राईले धरान १५ की सुस्मा कालिकोटे सँग मागि विवाह गरेका हुन । अहिले पनि मानव सोचाई फराकिलो वन्न नसकी रहेको बेला यी दुईले अन्तरजातीय विवाह गरेका हुन । दलित र गैरदलित बीच मागि...
माया एउटा मिठो आभास हो । कसैको मायामा परिन्छ भने एक झलक पाउन पाए संसार जितेजस्तै भावनाहरु मनमा बारम्बार आइरहन्छन् । तर, धेरैको माया सजिलै बस्छ पछि सम्बन्ध बिग्रदै गएपछि एकाअर्काप्रति दोषारोपण गर्ने बानी पर्छ । माया लगाउन त सजिलो छ तर निभाउन साह्रै गाह्रो । ब्रेकअप भएपछि दुवैजनाले पीडाको महसुस गर्छन् । कतिले व्यक्त...
मेरो उमेर १८ वर्ष भयो ֍ दिनमा १ पटक सेक्स गरिएन भने म पागल हुन्छु – के यो रोग हो या मेरो वैश चढेको हो ֍
मलाई धेरै नै यौन इच्छा हुन्छ, म १८ वर्षीया अविवाहित युवती हुँ। मलाई धेरै नै यौन इच्छा हुन्छ, तर म केटा साथीहरूसँग सम्पर्क राख्न चाहन्नँ। यस्तो अवस्थामा मैले के गर्नुपर्ला ? यौनइच्छा किन ? यौनइच्छा जीवनको अभिन्न अङ्ग हो। प्राकृतिक रूपमा सबै स्वस्थ व्यक्तिमा यौनइच्छा हुन्छ। यौनइच्छा एकदम स्वाभाविक हो। यो प्राकृतिक शक्ति वा व्यग्रताले...
अपराधिक मानसिकताको कुनै सिमा हुँदैन भन्ने उदाहरणहरु बेला बेला सुन्दै र देख्दै आएका छौँ । यसमा महिला र पुरुष कोही कमी छैनन् । पछिल्लो समय नक्कली अपहरणको मुद्धामा पनि निकै बढ्न थालेको छ । यस्तै नक्कली अपहरणको घटना दोलखामा घट्यो जहाँ आफनै श्रीमतीले श्रीमानलाई लुटन पूर्व प्रेमीसंग मिलेर योजना बनाईन् । दक्षिणी दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका...
कस्तो कलियुग आयो आफ्नै मान्छेबाट डराउनुपर्ने ! श्रीमानबाट श्रीमतीको हत्या देखि आफ्नै छोरी हत्यारा सम्मका घटना
आफ्नै मान्छेबाट डराउनुपर्ने कस्तो असुरक्षित समय हो यो ? श्रीमान्ले श्रीमतीको, प्रेमीले प्रेमिकाको, छोराले बाउको, साथीले साथीको ज्यान लिने घटना बढिरहेका छन् । सामान्य भनाभन, मसिना विवाद, शंका, अविश्वास आदिका कारण आफ्नैले आफ्नैलाई सिध्याइरहेका छन् । नागरिक न्युजका गोपाल दाहाल र अनिल यादवले अपराधको क्रूर दृश्य प्रस्तुत गरेका छन् । भावनाले मान्छेलाई नजिक बनाउँछ ।...
काठमाडौं / नेपालमो उत्तरी छिमेकी देश चीनमा अनौठो परम्पराहरु रहेका छन् । चीनका मानिसहरुको बारेमा भनिन्छ, उनीहरु रोमान्टिक विचारको मामलामा अलिकति रुढिवादी नै हुन्छन् । तर विहेपछि खेलिने खेल (वेडिङ गेमको)को सन्दर्भमा उनीहरु खुला विचारका हुन्छन् । यस्तोमा एक वेडिङ गेमको भिडियो सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल बनेको छ । जसमा बेहुलाका साथीहरु उनकै अगाडी उनकी श्रीमतीका...
काठमाडौं । मानिसहरुका यातना दिने फरकफरक तरिका हुन्छन् । भारतमा एकजना पुरुषले आफ्नी पत्नीलाई लाजमर्दो काममा लगाउने गरेको खुलासा भएको छ । कर्नाटकको बेलागावीमा बस्ने ती पुरुषले आफ्नी पत्नीलाई जबर्जस्ती अश्लील फिल्म देखाउँथे र उनीसँग अप्राकृतिक सम्भोग क्रिडा गर्दथे । यतिमात्र होइन उनले पत्नीलाई कुकुरसँग समेत यौन सम्पर्क गर्न बाध्य बनाउँदथे । पीडित महिलाका अनुसार...
एजेन्सी / आफ्नो साइकलले किचेको कुखुराको चल्ला र पैसा लिएर अस्पताल पुगेका भारतको मिजोरमका बालकको तस्बिर सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ । अहिले तिनै भाइरल बालक अहिले फेरी पनि भाइरल बनेका छन् । यसपटक उनको फोटो नभएर पेन्टिङ भाइरल भइरहेको छ । सुनिल पुकोडेले बनाएको उनको पेन्टिङ सामाजिक सञ्जालमा हजारौं प्रयोगकर्ताले शेयर गरिसकेका छन् ।...
पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावाद नजिकै रहेको हाफिजाब जिल्लाको पिँडी भट्टिया गाउँका एक व्यक्तिले श्रीमतीलाई डिभोर्स दिए लगतै कैचीले जिब्रो काटिदिएका छन् । डिभोर्स गरेपछि श्रीमती आक्रोसमा आएका ती व्यक्तिले पूर्व पत्नीको जीब्रो काटिदिएका हुन् । रिस नियन्त्रण गर्न नसकेपछि श्रीमतीले पत्नी नसरीनको जीब्रो काटिदिएका हुन् । जहाँगिरमाथि नसरीनले हत्या गर्न कोसिस गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गराएकी...
कहिलेकाहीँ आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको काम गर्दा आइपर्ने अप्ठेरोको सामना गर्नुपर्दा नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ भण्डै बाउको बिहे देखेको । कसैलाई बदनियतपूर्वक दुः ख दिन सकैको बाउको बिहे देखाइदिन्छु भन्ने पनि चलन छ । खासमा छोराछोरीले बाउको बिहे नदेख्ने र यो कार्य असम्भव भएकाले यस्तो भनाइ चलिआएको मानिन्छ । आमाको बिहेको बारेमा न कुनै उखान...
ड्युटीमै एक महिला प्रहरीले बर्दी खोलेर बक्षस्थल देखाएपछि…
एजेन्सी । अरुको सुरक्षाका लागि ड्युटीमा खटिएका बेला बर्दी खोलेर स्तन देखाउने एक महिला प्रहरी आफै फन्दामा परेकी छिन् । घटना अमेरिकाको टेक्साससँगै सीमा जोडिएको मेक्सिको क्षेत्रमा भएको हो । जहाँ नाडिया गार्सिया नामकी महिला प्रहरीले प्रहरी भ्यानमै टपलेश (स्तन देखिनेगरी अर्ध नग्न) सेल्फी खिचेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेपछि उनलाई जागिरबाट निकालिएको छ ।...
झापा / सुन्दा पनि आङ सिरिङ्ग हुने सोख भएका व्यक्ति हुन् झापाका श्यामकुमार प्रधान । उनको सोख जति अनौठो छ, चुनौती पनि उस्तै । उमेरले ६६ बर्ष पुगेका अर्जुनधारा नगरपालिका ५ का श्यामकुमार प्रधानको दैनिकी बिषालु सर्पसँग खेलेर बित्ने गरेको छ । प्रधान सजिलैसँग सर्प समाउछन् । झोलामा राखेर घर ल्याउछन् । उनले सर्प पाल्नका...
धनकुटा / धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र बसोबास गर्ने आठपहरिया जातिले कुनै पनि ब्यक्ति दुर्घटना, चोटपटक वा आत्महत्या गरी मृत्यु भएमा निजको मृत्यु भएकै दिन मलामीहरुलाई बाख्राको मासु खुवाएर सुद्दाई कर्म सक्ने अनौठो परम्परा रहिआएको छ । पहिला–पहिला यी समुदायका सबै मलामीहरुले खाजाको साथमा बाख्राको मासु नै खाने गरेपनि अहिले भने मृतकको नाममा चढाएर छाड्ने गरिन्छ...
अमेरिकामा एक महिलाले ब्लगमार्फत आफ्ना श्रीमानको लाजमर्दो कामको बारेमा बताएकी छिन् । ती महिलाले ब्लगमा लेखेकी छिन् उनका श्रीमान्ले आफ्नी छोरीलाई निकै अश्लील म्यासेज पठाएका थिए । ती व्यक्तिले यौनकर्मी महिलालाई पठाउन खोजेको म्यासेज झुक्किएर छोरीकहाँ पुगेको बताइएको छ । म्यासेज हेरेपछि छोरी डराएर आमाकहाँ गएकी थिइन् । आमाले म्यासेज हेरेपछि तत्कालै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने...
एजेन्सी । विवाहपछिको केही सयम दुई पार्टनरबीचको सम्बन्ध राम्रै चलेको हुन्छ । तर अचानक केही समस्या देखिन थाल्छ जसले गर्दा वैवाहिक जिन्दगीमा नै दरार उत्पन्न हुन्छ वा समस्या उत्पन्न हुन्छ । तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ तर कयौं पटक पतिपत्नीबीच सुत्ने बानिका कारण सम्बन्ध विच्छेदसम्मका घटनाहरु विश्वमा हुने गरेका छन् । हरेक चिजको आफ्नै महत्व र...
काठमाडौं । सडक खन्दा सिक्का भेटिन थालेपछि बर्दियामा अच्चम भएको छ । बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका–६ सोनपुरदेखि जोगनपुरसम्म सडक खन्ने क्रममा चाँदी र तामाका सिक्का फेला परेको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक मदनजित महराले माटोको घैंटोमा राखिएको ५४ मिलिग्राम बराबरको पाँच थान चाँदीका सिक्का र सात केजी दुई सय ग्रामको तामाको सिक्का फेला परेको बताए ।...
काठमाडौं– प्रत्यक वर्ष मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय खुसी दिवस मनाइन्छ । यहाँ खुसीबारे २० रोचक तथ्यहरु प्रस्तुत गरिएको छ । अनुसन्धानबाट प्रमाणित तलका तथ्यहरुबारे जानकारी मात्रले पनि तपाईलाई खुसी हुन प्रेरित गर्नसक्छ । १.खुसी सरुवा हुन्छ रुघाजस्तै खुसी पनि छेउछाउका मानिसहरुमा सजिलै सर्छ । सन् २००८ को एक ब्रिटिस अध्ययनअनुसार वयस्कहरुमाझ हुर्किएका बच्चा ठूलो भएसी बढी खुसी...